एउटै स्कुलका ७ शिक्षिका एकसाथ ग’र्भवती - Samachar Post Dainik
एउटै स्कुलका ७ शिक्षिका एकसाथ ग’र्भवती
कुनै कुने घ’टनाहरु यस्ता हुन्छन् की जुन योजनाबद्ध थियो वा संयोगबस भन्ने जिज्ञासा नै उत्पन्न हुने गर्छ । यस्ता कुराहरु सहजै बिश्वास गर्न मु’स्किल पर्छ । तर यस्तै भयो अमेरिका स्थित एक स्कुलमा । जुन अमेरिकाको कन्सास राज्यमा रहेको ओक…
कुनै कुने घ’टनाहरु यस्ता हुन्छन् की जुन योजनाबद्ध थियो वा संयोगबस भन्ने जिज्ञासा नै उत्पन्न हुने गर्छ । यस्ता कुराहरु सहजै बिश्वास गर्न मु’स्किल पर्छ । तर यस्तै भयो अमेरिका स्थित एक स्कुलमा । जुन अमेरिकाको कन्सास राज्यमा रहेको ओक स्ट्रीट स्कुलको कुरा हो ।
केही समय अगाडीको प्रसङ्ग हो, त्यस स्कुलमा अध्यापन गराउने ७ जना शिक्षिकाहरु एकसाथ ग’र्भवती भए ।
यो योजनबद्ध तरिकाले नभई मात्र संयोग भएको क्याटी नाम गरेकी शिक्षिकाले बताएकी छिन् । ‘
ग’र्भवती हुने शिक्षिका एक जना एक सन्तानको आमा समेत बनिसकेकी छिन् । उनी आफुसंगै कार्यरत रहेका अन्य शिक्षिकाहरु पनि एकसाथ ग’र्भवती भएपछि निकै उत्साहित भएको बताउँछिन् ।
स्कुलका ७ शिक्षिका एकसाथ ग’र्भवती भएपछि अमेरिकामा यो खबरलाई जोक्सको रुपमा सामाजिक सञ्जालमा इन्जोइ गरिरहेका छन् ।
सो स्कुलमा १४ शिक्षिका रहेकामा आधारले मा’तृत्व अवकास लिएका छन् भने बाँकी रहेका ७ जना पनि एकसाथ ग’र्भवती भएपछि यसले निकै रोचकताका साथ हेरिएको हो । यस्तो कसरी सम्भवत भयो ?
के यो योजनाबद्ध तरिकाले भएको थियो ? यस्तै सोचिन्छ तर शिक्षिकाहरु अनुसार यो एउटा संयोग मात्र हो । उनीहरुले अब उक्त स्कुलको पानी कसैले पनि नखाने भन्दै हाँसो गरिरहेका छन ।
यता ७ जना शिक्षिकाले पनि मातृत्व अवकास लिने भएपछी उनीहरुको स्थानमा अन्यलाई ल्याउने प्रिन्सिपल बताउँछिन् । स्कुलकी प्रिन्सिल एश्ले मिलरका अनुसार २० बर्षको करियरमा यस्तो घटना कहिल्यै नदेखेको बताउँछिन् । ७ जना शिक्षिकाहरु एकसाथ ग’र्भवती भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनी छक्क परिन् ।
जसमा एक जना शिक्षिकाले त जु’म्याहा जन्माउन लागेको उनको भनाई छ
प्रकाशित मिति १ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०४:२३